Nepali Rajneeti | प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको फोन, आखिर किन यस्तो भने?
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको फोन, आखिर किन यस्तो भने?
चैत्र २, २०७७ सोमबार ७३६ पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर भेट्नको लागि अनुरोध गरेका छन् ।
आज अपरान्ह माओवादी केन्द्रको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्नको लागि दाहालसँग आग्रह गरेको प्रचण्डकी स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमलाई जानकारी दिईन् । तर, दाहालले तत्काल भेट्नको लागि आनाकानी गरेका थिए ।
आजमात्रै, एमाले शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग-अलग भएका छन् ।
एमाले फुटाएर माओवादी केन्द्र सँग दाब्ने दाउमा नेपाल?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न नेपाल निवास काटेश्वर पुगेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएलगत्तै दाहाल पेसिडाँडाबाट नेपाल निवास पुगेका हुन् ।
उनीहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका छन् ।
नेताहरु दाहाल र नेपालबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ ।
काठमाडौं, १ चैत्र । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न नेपाल निवास काटेश्वर पुगेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएलगत्तै दाहाल पेसिडाँडाबाट नेपाल निवास पुगेका हुन् । उनीहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका छन् । नेताहरु दाहाल र नेपालबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ ।